Retail + Yemunharaunda Kutsvaga = Wishpond | Martech Zone
Retail + Yemunharaunda Kutsvaga = Wishpond
Muvhuro, July 11, 2011 Chitatu, November 30, 2011 Douglas Karr
Pasina kupokana kuti ecommerce iri kuita zvakakomba kune zvekutengesa ... asi kunyangwe hazvo yakakura sei yekutarisa yako, haigone kutsiva kufamba uchienda kuchitoro chekutengesa uye uchibata chigadzirwa. Kana kutumira kwemahara hakuzovi chinotsiva kufamba kunze kwechitoro nechinhu chaunoda izvozvi. Nezuro chaiye ndakatenga juicer kubva kuBhed Bath uye Beyond. Ndakaverenga toni pamhepo nezvavo uye ndakatopihwa dhisikaundi pane imwe yemasaiti… asi ini ndaida kuenda kumba ndonogadzira girazi rangu rekutanga rejusi yeveggie masikati iwayo ... kwete kuiisa kwevhiki.
Wishpond inotarisira kuve iri yepakati pakati pekutengesa nepamhepo, ichipa zvakanakisa zvepasirese. Uyu unogona kunge uri mukana unoshamisa wezvitoro zvakaona kudonha mukutengesa kuti vawane kutariswa pamhepo kwavanofanirwa.
Kubva paWishpond saiti:
Wishpond inowana zvigadzirwa zvaunoda kubva kuzvitoro padyo newe. Injini yekutenga yeWishpond inotsvaga zvitoro zviri padyo uye mepu kunze kwezvakanakisa dhorobha. Hapanazve kuendesa kunomirira, hapasisina mari yekutumira. Tora zvaunoda nhasi.
Dhiri muhomwe yako, chero kwaunoenda. Yedu iPhone app inowedzera simba rako rekutenga. Tora iyo app kuti uteedzere madhiri padyo nenzvimbo iwe yaumire pairi, kunyangwe iwe uri wehwindo kunotenga mumugwagwa kana kubhurawuza kubva kunyaradzo yemusha.
Ita shuwiro: tora mitengo yauchada. Unoshuva kuti kutsvaga kwechigadzirwa zvemuno kungakuitire basa racho? Gadzira Chishuwo pane chigadzirwa chaunoda, uye Wishpond inokuzivisa kana mutengo uchinge wadonha, tsvaga zvigadzirwa zvakafanana zvinoenderana nemutengo wako waunoda uye wotumira zvakasarudzika madhiri kubva kuzvitoro zviri padyo anoenderana nemutengo iwoyo.
The Wishpond Merchant Center inopa vatengesi vemuno kusimudzira zvirinyore zvigadzirwa zvavo uye madhiri, zvichipa vatengi sarudzo iri nani yezvitoro zvemuno zvekusarudza kubva.
Heino pfupi vhidhiyo yebasa:
Uye kana iwe uine chero kukahadzika kuti kushambadza kuri kuchinja, heano mamwe makuru matanho kubva kuWishpond mune infographic inotsanangura kwavanobatsira.
Architects uye B2B Tweeting
Nhare mbozha Kubhadhara Kugadziriswa
Jul 12, 2011 na5: 56 PM
Ndatenda nekunyora kumusoro!